ढल्कदो उमेर ? के हो त्यो ? ज्लाटनको अर्को उत्कृष्ट गोलमा मिलान बिजयी – Talking Sports
ढल्कदो उमेर ? के हो त्यो ? ज्लाटनको अर्को उत्कृष्ट गोलमा मिलान बिजयी
स्विडिस स्टार ज्लाटन इब्राहिमोभिच अहिले ३९ बर्षका भए । प्रतिस्पर्धात्मक फुटबलका लागि यो उमेर उपयुक्त होइन । तर ज्लाटन त बिश्वकै कठिन लिग मध्येको एक खेलिरहेका छन् । र लगातार गोल पनि गरिरहेका छन् ।
आइतबार ज्लाटनले अर्को गोल गरे र उक्त गोलको मद्दतमै एसि मिलानलाई महत्वपूर्ण जित दिलाए । इटालियन सिरी आ मा मिलान युडिनेजीलाई २–१ ले पराजित गर्दै लिगको अग्र स्थानमा कायमै रह्यो । मिलानले यो सिजन ६ मध्ये पाँच खेल जितिसकेको छ र त्यसमा ज्लाटनले चार खेल खेलेका छन् ।
उनले ७ गोल गरिसकेका छन् । गत सिजनको मध्यतिर आएका ज्लाटनले मिलानमा आफ्नो दोश्रो स्पेलमा २२ खेल खेल्दै १७ गोल गरिसकेका छन् ।
कुङफु किक प्रहार गर्दै थुप्रै गोल गरेर अत्याधिक रुचाइएका ज्लाटनको आइतबारको गोल अझै बिशेष थियो । त्यो गोलले उनको उमेरलाई ढाटेको थियो । युडिनेजीको डि बक्समा दुई डिफेण्डर, रोद्रिगो बेकाओ र सेबास्चियन डि मेयोकोबीचमा च्यापिएका ज्लाटनले उत्कृष्ट ढँगले बाइसाइकल किक प्रहार गर्दै गोलकिपर हुवा मासोलाई समेत बिट गर्दै गोल गरे ।
यो ज्लाटनको धेरै मध्येको उत्कृष्ट एक्रोब्याटिक गोल थियो । खेलमा फ्रांक केस्सीले १८ औं मिनेटमा मिलानलाई अग्रता दिलाए पनि दोश्रो हाफ शुरु भएको तीन मिनेट पछि नै रोद्रिगो डि पउलले युडिनेजीको लागि बराबरी गोल गरेका थिए ।
मिलानलाई त्यसपछि जितका लागि आफ्नो बुढो बाघ नै आवश्यक पर्यो । “मेरो गोल राम्रो थियो तर जितले बढी महत्व राख्छ,” ज्लाटनले भने । “हामी युरोपमा सबैभन्दा युवा टोलीमध्येको एक हौं । मैले टिमकोे औषत आयु बढाएके दोष आफ्नो नाममा लिन्छु तर हाम्रो केटाहरुले मलाई निकै जवान महसुस गराइदिने गरेका छन् ।”
‘क्रिष्चियानो इज ब्याक’
१४ बर्ष पछि ओल्ड ट्राफोर्डमा आर्सनलको पहिलो जित
T20 World Cup 202110 hours ago